Tampa Data Recovery န်ဆောင်မှုများ | LC နည်းပညာ | Tampa Florida
Tampa Data Recovery န်ဆောင်မှုများ
နေအိမ် → Tampa Data Recovery န်ဆောင်မှုများ
LC နည်းပညာဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအမျိုးအစားအားလုံးကိုအဘို့ဒေတာဆယ်တင်ရေးန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်, hard drive ကိုဒေတာဆယ်တင်ရေးအပါအဝင်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဦးအဖြစ်’ အကြီးဆုံး flash မှတ်ဉာဏ်ဒေတာဆယ်တင်ရေးန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများသည်, LC နည်းပညာအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအနေဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှလူတိုင်းအတွက်အထူးဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေး. ကျွန်ုပ်တို့၏ Tampa, ဖလော်ရီဒါဒေတာဆယ်တင်ရေးန်ဆောင်မှုများဒေတာကိုမဆိုအပေါင်းတို့နှင့်အမျိုးအစားများကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်. သငျသညျမတော်တဆဒေတာဖိုင်များကိုဖျက်ပစ်ဖူး, ပုံရိပ်တွေ, သင့်မီဒီယာကနေဗီဒီယိုတွေကိုသို့မဟုတ်အသံဖိုငျမြား, တစ်ရေးဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာချပ်ဒါမှမဟုတ်မီဒီယာဆွဲထုတ်? ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာဆယ်တင်ရေးန်ဆောင်မှုသင်၏ဖိုင်များကို recover ပြန်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုရနိုင်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Tampa, ဖလော်ရီဒါဒေတာဆယ်တင်ရေးန်ဆောင်မှုဓာတ်ခွဲခန်းများပုဂ္ဂလိကထားရှိမည်အားလုံးဖောက်သည်ဒေတာနှင့်အတူလုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်. ထိန်းချုပ်ထားသောဓာတ်ခွဲခန်း access ကိုသာသင့်လျော်သောအထူးကုထိခိုက်မခံတဲ့သတင်းအချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ဆိုလိုတယ်. ကျနော်တို့မှန်မှန်အစိုးရလျှို့ဝှက်ဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ကန်ထရိုက်နေကြတယ်, ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ. LC နည်းပညာပစ္စည်းများလိုအပ်ခွဲခြားကြောင်းလုံခြုံရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အဆင့်အထိနေသားတကျဖြစ်ပါသည်. အားလုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်စာရွက်စာတမ်းများအပြီးအပိုင်ပြီးနောက်သုတ်နေကြ 30 ရက်ပေါင်း.
•ခွန်ကောက်-အခမဲ့ US မှာ: 1-866-603-2195
•ဥရောပမှာ, ခေါ်ရန်: +44 (0)115 704 3306
flash ကိုမီဒီယာဒေတာဆယ်တင်ရေးန်ဆောင်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Flat-ကြေးစျေးနှုန်းတစ်ဦးကို CD သို့မဟုတ် DVD ကိုရန်သင့်အချက်အလက်များ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပါဝင်သည် (သို့မဟုတ်ပဲအနည်းငယ်ပိုအဘို့ကို USB drive ပေါ်တွင်) နှင့်ရေကြောင်းပြန်လာ. အမေရိကန်ပြင်ပတွင်ပြန်လည်ဆယ်တင်နိုင်တဲ့, တစ်ဦးအပိုဆောင်းရေကြောင်းအခကြေးငွေဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်. ပြန်လာရေကြောင်းထက်အခြားတာဝန်ခံအဘယ်သူမျှမငါတို့သည်သင်တို့၏ဖိုင်တွေရှာမကြပါလျှင်!
2GB အထိဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာများအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု – $125
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမီဒီယာများအတွက်ဝန်ပို (တနည်း. connector ကိုချိုး, စသည်တို့ကို) – $100
ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ 4GB များအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု – $150
ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ 8GB များအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု – $175
ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ 16GB များအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု – $225
ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ 32GB များအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု – $275
ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ 64GB များအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု – $325
ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ 128GB များအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု – $375
Recovery ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ 256GB များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကျော် – $425
Recovery ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ 512GB များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကျော် – $475
Recovery ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ 1TB များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကျော် – $525
အဆိုပါပြီးစီးခဲ့ Send recovery ကို Form ကို နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလိပ်စာမှမီဒီယာ.
LC နည်းပညာSanDisk®ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအမျိုးအစားအားလုံးကိုအဘို့ဒေတာဆယ်တင်ရေးန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်. ဒီဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာ၏သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးပြားမှုနှုန်းမှာအားလုံးSanDisk®ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာများအတွက်ရရှိနိုင်. flash ကိုမီဒီယာများပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Flat-ကြေးစျေးနှုန်းတစ်ဦးကို CD သို့မဟုတ် DVD ကိုရန်သင့်အချက်အလက်များ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပါဝင်သည် (သို့မဟုတ်ပဲအနည်းငယ်ပိုအဘို့ကို USB drive ပေါ်တွင်) နှင့်ရေကြောင်းပြန်လာ. အမေရိကန်ပြင်ပတွင်ပြန်လည်ဆယ်တင်နိုင်တဲ့, တစ်ဦးအပိုဆောင်းရေကြောင်းအခကြေးငွေဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်. ပြန်လာရေကြောင်းထက်အခြားတာဝန်ခံအဘယ်သူမျှမငါတို့သည်သင်တို့၏ဖိုင်တွေရှာမကြပါလျှင်!
2GB အထိSanDisk®ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Recovery ကို – $125
SanDisk®ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Recovery ကို 4GB – $150
SanDisk®ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Recovery ကို 8GB – $175
SanDisk®ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Recovery ကို 16GB – $225
SanDisk®ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Recovery ကို 32GB – $275
SanDisk®ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Recovery ကို 64GB – $325
SanDisk®ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Recovery ကို 128GB – $375
SanDisk®ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Recovery ကို 256GB နှင့်ကျော် – $425
SanDisk®ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Recovery ကို 512GB နှင့်ကျော် – $475
SanDisk®ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Recovery ကို 1TB နှင့်ကျော် – $525
သင်တို့သည်ငါတို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာပြန်လည်နာလန်ထူန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက, please call us Toll Free in the US at (866) 603-2195 သို့မဟုတ် (727) 449-0891 အမေရိကန်ပြင်ပမှာဖောက်သည်တစ်ဦးကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူစကားပြောဆိုရန်. ဥရောပနှင့်သြစတြေးလျဧည့်သည်များသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး LC Tech မှဗြိတိန်ပြန်လည်နာလန်ထူန်ဆောင်မှုများ.
အောက်ပါလိပ်စာသို့သင့်မီဒီယာတင်ပို့ရန် ကျေးဇူးပြု. (ဤအချက်အလက်ကိုလည်းပြန်လည်နာလန်ထူပုံစံပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါတယ်):
LC နည်းပညာအင်တာနေရှင်နယ်, Inc မှ.
29750 အမေရိကန် Hwy 19 N ကို
သန့်ရှင်းသောရေ, FL 33761
လျ: (727) 449-0891
သင်တစ်ဦးကြံ့ခိုင် mailer အတွက်သင့်မီဒီယာ package သေချာအောင်လုပ်ပါ, အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာ်အဖြစ်က mark – သံလိုက်စက်ကွင်းမှမြင်အောင်မပြကြဘူး. ထိုအခါ, USPS ဖြင့်ပေးပို့, ယူပီအက်စ်, FedEx, ဝေဟင်သို့မဟုတ်အထုပ်ခြေရာခံခံရဖို့ခွင့်ပြုမဆိုရေကြောင်းနည်းလမ်း. ကဒ်လုံခြုံနှင့်လိပ်စာမှန်ကန်သေချာဖြစ် ကျေးဇူးပြု.. LC နည်းပညာအင်တာနေရှင်နယ်, Inc မှ. ရေကြောင်းအတွက်ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးဖြစ်ကြောင်းကတ်များများအတွက်တာဝန်မယူ.
LC နည်းပညာပြန်လည်နာလန်ထူသည့် End-user များ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုထက်ကျော်လွန်လိုအပ်သည်အဘယ်မှာရှိသူတို့အားကြိမ် hard drive ကိုဒေတာဆယ်တင်ရေးန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်. ဒီအမှုခင်းပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်နိုင်ပါတယ်, အဆိုပါ hard drive ကိုမှဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူသို့မဟုတ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှု. နှုန်းထားများ drive ကိုတစ်ဦးအပြားကြေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူအပေါ်သုံးစွဲအချိန်ပမာဏပေါ်အခြေခံထားတယ်.
ကြောင့် hard drive တွေ၏တိကျသဘောသဘာဝများနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ကြုံတွေ့ကိစ္စများ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမှ, ပြန်လည်နာလန်ထူစျေးနှုန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးအကဲဖြတ်စဉ်အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်. ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီ RAID Array ကိုနဲ့ Hard drive တွေကိုအဘို့အပိုဆောင်းစွဲချက်.
ယထာဘူတကျသော / File System ပျက်စီးခြင်း: အဖြစ်အနိမ့် $750
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ / component ပျက်စီးခြင်း: အဖြစ်အနိမ့် $1500
မှတ်စု: ၏ non-အမ်းပြားကြေးစျေးနှုန်းရှိပါတယ် $100 drive ကိုပြန်လည်နာလန်ထူ၏အကဲဖြတ်ဘို့ drive ကိုတစ်ဦးလျှင်. သင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အတူရှေ့ဆက်သွားကြဖို့ကိုရှေးခယျြခဲ့လျှင်, ကြောင်းအခကြေးငွေပြန်လည်ကုန်ကျစရိတ်အသုံးချနေသည်.
စတင်ရယူခြင်းလွယ်ကူသည် – သင့်ရဲ့ဒေတာကိုပြန်ရ!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hard drive ကိုရေကြောင်းပုံစံကို Download လုပ်ပါ, ထုတ်ဖြည့်ပါ, ကလက်မှတ်ရေးထိုး, သငျတို့သညျကြှနျုပျတို့အတှကျကတင်ပို့သည့်အခါသင့်ရဲ့ drive ကိုနှင့်အတူပါဝင်သည်.
အဆိုပါ hard drive ကိုရေကြောင်းပုံစံကို download လုပ်ပါရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်ုပ်တို့၏လိပ်စာမှရေကြောင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်သင်္ဘောရှောင်ရှားရန်ဂရုတစိုက် drive ကိုအထုပ်မှာ.
hard drive တွေတင်ပို့ထုတ်လုပ်သူရဲ့ထောက်ခံချက်နှင့်အညီ drive ကိုအထုပ်မှာ. မာကုအီလက်ထရောနစ်မီဒီယာ်အဖြစ်အထုပ် – သံလိုက်စက်ကွင်းမှမြင်အောင်မပြကြဘူး. USPS က Send, ယူပီအက်စ်, FedEx, ဝေဟင်သို့မဟုတ်အထုပ်ခြေရာခံခံရဖို့ခွင့်ပြုမဆိုရေကြောင်းနည်းလမ်း. လိပ်စာ drive ကိုနှစ်ချက်စစ်ဆေးမှုများအာမခံထား ကျေးဇူးပြု.. LC နည်းပညာအင်တာနေရှင်နယ်, Inc မှ. ရေကြောင်းအတွက်ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးဖြစ်ကြောင်း packages များအဘို့တာဝန်မယူ.
သငျသညျခရက်ဒစ်ကဒ်အားဖြင့်ကြိုတင်မဲအတွက်အကဲဖြတ်ကြေးများအတွက်ပေးဆောင်လိုပါက, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလှည်းခလုတ်ကိုဖို့ add ကို click ကျေးဇူးပြုပြီး:
Hard Drive Recovery ကိုဝန်ဆောင်မှုအကဲဖြတ်ကြေး – $100
If you have any questions regarding our hard drive recovery services, please call us Toll Free in the US at (866) 603-2195 သို့မဟုတ် (727) 449-0891 အဆိုပါ U.S အပြင်ဘက်တွင်. ဖောက်သည်တစ်ဦးကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူစကားပြောဆိုရန်. ဥရောပနှင့်သြစတြေးလျဧည့်သည်များသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး LC Tech မှဗြိတိန်ပြန်လည်နာလန်ထူန်ဆောင်မှုများ.